ဘယ် Apple က MacBook လက်တော့ငါမဝယ်သင့်တယ်? - သတင်း Rule
မာရိကသူမ၏နေရာတွင်အစားထိုးရန်လိုအပ်ပါသည် 2009 Pro ကို MacBook ပေမယ့်ရွေးချယ်စရာအားဖြင့်လွှမ်းနေသည်. အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘယ် Apple က MacBook လက်တော့ငါမဝယ်သင့်တယ်?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 15 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2018 10.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကျွန်မနှင့်အတူပေါ် soldiered ပါပြီ 2009 MacBook Pro, ငါအင်တာနက် access ကိုအသုံးပြု, လူမှုမီဒီယာ, ဓာတ်ပုံများ, ငါ့အသုတေသန. ဒါပေမယ့်အဝေးကနေတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်, ငါကို up-to-date ဖြစ်အောင် operating system ကိုအသုံးပွုရရန်ရှိသည်, ငါ့အ Mac ကိုငါမရှိတော့ကြောင့် update လုပ်နိုင်အောင်အသက်.
ဒါကြောင့်, ငါအသစ်တခုက MacBook ဝယ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါရွေးချယ်စရာများကလွှမ်းမိုးနေပါတယ်. ငါ Touch ကိုဘားလိုအပ်ပါသလား? ငါဘယ်လောက် memory နဲ့ SSD ကိုမလိုအပ်ပါဘူး? မာရိက
အောက်ပါ ထုတ်ကုန်အပေါ် refresh 30 အောက်တိုဘာလ, Apple ကအများကြီးအတူတူပင်အလုပ်မလေး MacBook တွေရှိပါတယ်. အဆိုပါကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်, သင်တစ်ဦးအပေါ်ရှင်သန်နိုင်လျှင် 2009 MacBook Pro, သူတို့ကိုမဆိုသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါသတင်းဆိုးကိုသူတို့ရှိသမျှသည်သူတို့ကိုမဝယ်ငါ့ကိုပယ်ထားလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂါရပ်များရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, သော်လည်း, ကံကောင်းခြင်းနှင့်အတူ, သူတို့သေချာပေါက်သငျသညျကိုချွတ်ပယ်မည်မဟုတ်.
သို့သော်, သငျသညျကိုအနည်းဆုံးနှိုင်းယှဉ်နိုင်အောင်ငါကတစ်ဦးကို Apple Store မှာသို့မဟုတ်အခြား stockist သွားရောက်မရှိမဖြစ်င်ထင်ပါသလဲ နှစ်ခု 13in MacBook တွေနားမှာအခြမ်း. ဤရွေ့ကားအဟောင်း MacBook Air ကိုဖြစ်ကြသည် (အကောင်းဆုံးကီးဘုတ်, အဆိုးဆုံးမျက်နှာပြင်) နှင့် MacBook Pro နှင့် (စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောကီးဘုတ်, အလွန်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်).
ငါပိုမြန်သောချစ်ပ်ကိုသင်ပြောပြနိုင်, နောက် ... ပြီးတော့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတှေ့အကွုံပုကီးဘုတ်၏အရည်အသွေးနှင့်မျက်နှာပြင်ကလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်. တစ်ဦးက blog post: သင်ကြိုက်နှစ်သက်တံ့သောသူမြားကိုသငျသညျမပြောနိုင်, သို့မဟုတ်သင်လိုက်လျောအောင်အလိုရှိပါရှိရာ.
အားလုံးအသစ်က Mac အတွက်လက်ပ်တော့ Apple ရဲ့အနိမ့်ခရီးသွားလိပ်ပြာကီးဘုတ်အတူပါလာ, ကှဲသက်သေပြခဲ့သည့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကျွန်တော့်အတွက်, အသစ်က MacBook တွေနှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြဿနာကလိပ်ပြာကီးဘုတ်ဖြစ်ပါသည်, ပထမဦးဆုံးနှင့်အတူမိတ်ဆက်ခဲ့သည့် 12MacBook ၌ 2015. ဒုတိယဗားရှင်းက MacBook Pros ၌ထငျရှား, အသုံးပြုသူအရေအတွက်ခဲ့ဘယ်မှာ ကီးဘုတ်မအောင်မြင်မှုများ သော့အောက်မှာရတဲ့ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ် detritus ကြောင့်. နောက်ဆုံးပေါ် MacBook တွေဖုန်မှုန့်ထုတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အတူတတိယဗားရှင်း. ကျနော်တို့ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတက်ရပ်ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ရှိသေး.
အပြင်ကနေ, ငါလိပ်ပြာကီးဘုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောစာရိုက်အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းရှာတွေ့. ကျွန်မစာစီလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မထိ-type အမျိုးအစားမှလေ့လာသင်ယူ, ငါခရီးသွားအမြောက်အမြားနှင့်အတူစက်မှုသော့နှင့်အတူကီးဘုတ်ပိုနှစ်သက်. လိပ်ပြာသော့နီးပါးမျှခရီးသွားကြ. ဤသည်အဟောင်းကို MacBook Air ကိုဦးတည်ငါ့ကိုတွန်းမယ်လို့, အရာ Laptop ကိုစံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောကီးဘုတ်ရှိပါတယ်.
ဝမ်းနည်းစရာ, အဟောင်းကို MacBook Air ကိုအခြားပြဿနာများရှိပါတယ်. အထူးသဖြင့်, အဆိုပါ touchpad ကိုနှင့်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုထက်ပိုဆိုးများမှာ အသစ်က MacBook Air ကို. (သူတို့ကမဆိုးနေ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဖြစ်အကောင်းမရှိကြပေ။)
ဝမ်းသာစရာ, အရသာအမျိုးမျိုးကွဲပြား. အချို့လူများကပြားချပ်ချပ်ပိုနှစ်သက်, တုံ့ပြန်ခြင်းကီးဘုတ်, သင်လိပ်ပြာကီးဘုတ်ကဲ့သို့သင်တို့ရှာတွေ့စေခြင်းငှါ. ဒါကြောင့် အကယ်., ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်. ဒါကြောင့်အပေါ်တရာစကားအနည်းငယ်ရိုက်ထည့် - - ငါမယ့်သင်ကလေးနက်သွားလာရင်းပေးရနျလိုအပျထင်သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတနေ့လုံးအဲဒါကိုသုံးပြီးရန်ကျူးလွန်မတိုင်မီ ... သို့မဟုတ်န်းကျင်ပြင်ပက USB ကီးဘုတ်တင်ဆောင်လာသော.
touch ကိုဘား? အဘယ်သူမျှမ
အဆိုပါ Touch ကိုဘားသည့် MacBook Pro နှင့်ပေါ်က F key တွေကိုအစားထိုး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သင်တစ်ဦး Touch ကိုဘားမလိုအပ်ပါဘူး. တကယ်တော့, အဘယ်သူမျှမကယ့် Touch ကိုဘားလိုအပ်ပါတယ်. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, သူတို့ကသာပိုပြီးစျေးကြီး MacBook Pros တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်နေကြတယ်, သင်တို့ကိုငါသင်လိုအပ်ထက်အများကြီးပိုစျေးကြီး MacBook ဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါဘူးယူဆ.
အဆိုပါ 13Mid-2009 MacBook Pro မှာ တစ်ခုက Intel Core ခဲ့2Duo Processor ကို, ဒီနေ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကဆိုးရွားသည့်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်သာမှတ်ဉာဏ် 2GB ပါခဲ့ (8GB မှတိုးချဲ့) နှင့် 160GB hard drive ကို, ထုံးစံအဆင့်မြှင့် 128GB နှင့် 256GB SSDs ပါဝင်သည်သော်လည်း. ဒီနေ့သင်မဝယ်နိုင် lowliest MacBook ပိုကောင်းသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်လိမ့်မယ်.
ကံမကောင်းသဖြင့်, သငျသညျယနေ့ရဲ့ MacBook upgrade မနိုင်, ဒါကြောင့်သင်အစဉ်အဆက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သလောက်အာဏာကိုမဝယ်ရန်ရှိသည်. အသက်ရှည်ဘို့, ဒါကြောင့်မှတ်ဉာဏ်၏ 16GB နှင့် 256GB သို့မဟုတ်ပိုကြီးသော SSD ကိုရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ Apple ကထိုအအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ပရီမီယံပညတ်.
ကံကောင်းစွာ, MacBook တွေအတော်လေးကောင်းစွာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုင်, ဒါကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာခြေရင်း spec အဘို့သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သင်ပိုပြီးပါဝါလိုအပ်ပါတယ်တှေ့လြှငျ, ရောင်းအသစ်တစ်ခုတဦးတည်းကိုဝယ်.
အဆိုပါ MacBook Intel ရဲ့အနိမ့်ပါဝါပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုသည်. ဓါတ်ပုံ: ပန်းသီး
သင့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ MacBook တွေ၏နှစ်ခုအတွက် non-သိသာပြဿနာ Intel Core M ကပရိုဆက်ဆာရှိပါတယ်ရှိနေသည်, ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်မြန်နှုန်းအပေါ်ထားတဲ့အပေးအယူ. Apple ကပထမဦးဆုံးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ 1.1GHz Dual-core က M-5Y31 chip ကိုနှင့်အတူဤကြိုးစားခဲ့ 2015 MacBook (12မျက်နှာပြင်မှာ). ယနေ့တွင်, core M ကချစ်ပ် 12 MacBook တွေအတွက်သာအသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ဆုံးပေါ် MacBook Air မှာ.
Intel ကသူ့ရဲ့အမည်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသိသာမယ့်. သည် "တဲ့ Core M က" သတ်မှတ်ရေးအားဖြင့်ပယ်ထားကြပြီမယ်သူကပြည်သူ့ဖြစ်ကောင်းသူတို့တစ်တွေ Y ကိုစီးရီး chip ကိုလာပြီဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိမည်မဟုတ် - အထူးသ, တစ်ဦး core i5-8210Y - အစားခေတ်ရေစီးကြောင်းလက်ပ်တော့များတွင်အသုံးပြုပိုမိုအစွမ်းထက်ဦးစီးရီးချစ်ပ်များ၏.
ငါ Core M / Y ကိုစီးရီးချစ်ပ်ဆန့်ကျင်ဘာမျှမရှိ, ငါ့အ 8GB / 128GB Touch-screen ကို Lenovo Yoga 700 တူညီတဲ့အဓိက M3-6Y30 အချို့ MacBook တွေအတွက်အသုံးပြုထားပါတယ်. အဆိုပါခြားနားချက်ကပေါ့ပေါ့ / အားလပ်ရက်အသုံးပြုမှုများအတွက်စက်ရဲ့ဖြစ်ပါသည်, ငါ့အဓိကစနစ်နှင့်ကသာငါ့ကို£ 339,99 ကုန်ကျ. ငါသည်ငါ၏အဓိကစက်အဖြစ်တဦးတည်းမဝယ်မယ်လို့, တဘို့£ 1200 charging ရယ်စရာဖြစ်ပါသည်.
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးပွားမည်အကြောင်းအရာ - - တစ်ဦးက Core i5-8210Y သင်၏အလင်းကိုအသုံးပြုဘို့အတွက်လုံလောက်သောအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သင့်ပေမယ့်သေး MacBook Air ကိုအတွက်ပိုက်ဆံအဘို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုတန်ဖိုးကိုင်.
Apple ရဲ့ဟောင်းများကို MacBook Air ကို. ဓါတ်ပုံ: ရှိမုနျကို Lees / အနာဂတ်ထုတ်ဝေရေး / Rex
Apple ကအဟောင်း 13in MacBook Air ကိုထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်, ထိုသို့£ 949 မှာပိုက်ဆံအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုကြည့်, ယင်း၏ပဉ္စမမျိုးဆက် Core i5-5350U ပရိုဆက်ဆာနှင့် Non-လှာမျက်နှာပြင်ရှိနေသော်လည်း. ဒါဟာရှိပါတယ်, ကျွန်တော့်အမြင်မှာ, အကောင်းဆုံးကိုကီးဘုတ်, ထိုသို့နေဆဲကောင်းသောအဟောင်းဆိပ်ကမ်းများရှိပါတယ်, တစ်ဦး SD ကဒ် slot ပါနှင့် magsafe connector ကိုအပါအဝင်. ရှိသမျှသည်အခြားသောကဏ္ဍ, အသစ်က MacBook Air ကို (2018) ဝေးသာလွန်ဖြစ်ပါသည်.
အဟောင်း 12 MacBook နေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် underpowered နှင့်အလွန်အမင်းကြီးလွန်း, အဆိုပါ 1.2GHz Core M3-7Y32 ဗားရှင်းနဲ့ (2017) £ထားသော 1,249 ကုန်ကျ. ဒီစက်ကိုစဉ်းစားဘို့အတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကအသေးငယ်ဆုံးနှင့်အပေါ့ပါးဆုံးင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ (0.92ကီလိုဂရမ်) MacBook သင်ရနိုင်.
အသစ် 13in MacBook Air ကိုအဟောင်းကိုဗားရှင်းထက်ပိုမိုသေးငယ်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါသည်, ဝေးသောသာလွန်မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်, ပိုကြီးတဲ့အင်အားစု-touch နဲ့ trackpad, နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ပီ. ဒါဟာ£ 1,199 မှာလည်းပိုပြီးစျေးကြီးင်. အဆိုပါအားနည်းချက်များလိပ်ပြာကီးဘုတ်နှင့် Core M / Y ကိုစီးရီး Processor ကိုပါဝင်သည်.
နောက်ဆုံး, Touch ကိုဘားမပါဘဲ Pro ကိုပု 13in MacBook ရှိပါတယ် (Mid-2017), တစ်ပိုမြန်သတ္တမမျိုးဆက် 2.3GHz Core i5 ကိုထောက်ပံ့ပေး (7360အဆိုပါ) Processor ​​ကို, အပို£ 50 အဘို့အများကြီးပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အရောင်က rendering, ဆိုလိုသည်မှာ£ထားသော 1,249. အဆိုပါ Pro ကိုလည်းတောက်ပသောမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ် - 500 nits အစား 300 ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်သင့်ရာ - nits. သင့်အနေဖြင့် Air ရဲ့သပ်ပုံသဏ္ဌာန်ဆုံးရှုံး, စာရိုက်ပိုမိုအဆင်ပြေရာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Pro ကိုသစ်ကို Air ထက်သိသိသာသာပိုလေးမဟုတ်ပါဘူး (1.371.25kg vs ကီလိုဂရမ်).
ဒါကြောင့်အဟောင်း Air ကိုကီးဘုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါပို MacBook Pro နှင့်ချင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကအကောင်းဆုံးဝယ်မယ့်ငါထင် - သင်ကတတ်နိုင်လျှင်. ငါသည်လည်းကြောင့်အနာဂတ် operating system ကိုမွမ်းမံမှုများအဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးအလောင်းအစားင်ထင်.
upgrades များမှာ, ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, စျေးကြီး. 16GB မှတျဉာဏျ၏ Pro ကိုဖွင့် 8GB တိုးပွားလာ£ 180 ကုန်ကျ, နှင့် 256GB ဖို့ 128GB SSD ကိုအဆင့်မြှင့်£ 200 ကုန်ကျ, ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့ spec £ထားသော 1,629 ကုန်ကျ. ဖြည့်ထည့် AppleCare £ 1,878 မှနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းတက် bumps.
ဒါဟာပိုက်ဆံတွေအများကြီးဖွင့်, ဒါပေမယ့်ငါးနှစ်ကျော်£ 1 တစ်ရက်အဖြစ်ကစဉ်းစားနဲ့ဒါမကောင်းတဲ့မခံစားရပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်, သင်တစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာလျှော့စျေးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသင့်တယ်, စျေးနှုန်းဆင်းစေမည်ဖြစ်သော. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကနေတဆင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရှိမရှိရှာဖွေစစ်ဆေး, အွန်လိုင်း, သို့မဟုတ်တစ်ဦးက Apple Store မှာအချိန်.
Apple ကလည်း၎င်း၏မှတဆင့်အဟောင်းကိုပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ကုန်သွယ်ရေး-ins ကမ်းလှမ်း GiveBack အစီအစဉ်. ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ MacBook Pro နှင့်များ၏အမှတ်စဉ်ရေတွက်ဘဲရင့်ဘယ်လောက်မပြောနိုင်. ဒါဟာဖြစ်နိုင်တွေအများကြီးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအဟောင်း warhorse စနစ်တကျပြန်လည်အသုံးပြုရလိမ့်မယ်.
သင်တစ်ဦးမေးခွန်းတယ်ဖူး? ထိုသို့အီးမေး Ask.Jack@theguardian.com
12896	3 ဘယ် Apple က MacBook လက်တော့ငါမဝယ်သင့်တယ်?
← 6T ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း OnePlus အဆိုပါ 20 ၏အကောင်းဆုံး gadgets 2018 →